Stay Cool Stay Fresh Challenge TikTok ပြိုင်ပွဲ - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›Stay Cool Stay Fresh Challenge TikTok ပြိုင်ပွဲ
ဟေး အချစ်တို့ ရေ Cool Fresh နဲ့ အတူ Tik Tok ဆော့ရင်း ဆုငွေ တစ်သိန်းဆု (၅ဆု) အပြင် Cool Fresh product တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်ရေးအတွက် အခုပဲ TikTok Video ရိုက်ပြီးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ရအောင်..
Sofy Myanmar Page မှာတင်ပေးထားတဲ့ မေလသံစဉ်လေးရဲ့ နမူနာ Video လေးအတိုင်း May Melody ရဲ့ Tik Tok ID -> (@maylathanzin) သို့မဟုတ် Sofy Myanmar TikTok (@SofyMyanmar)ကိုရှာပြီး Cool Fresh music လေးနဲ့အတူ အလန်းဆုံးနဲ့ အမိုက်ဆုံး ဖန်တီးထားတဲ့ TikTok Video ကို ဖော်ပြထားတဲ့ chat box link လေးကိုပို့ပေးယုံပါပဲ
ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ့် ပုံစံနဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကတော့
၁။ Sofy Myanmar Page ကို Like လုပ်ပေးပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ Sofy Cooling Fresh (သို့) Sofy Eva Cool Fresh အထုပ်ကိုပါ TikTok ထဲတွင် ပါဝင်အောင် ရိုက်ကူးပြီး Caption မှာ “Stay Cool Stay Fresh Challenge” လို့ရေးပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် Tik Tok Video ကို Face Book မှာ Public နဲ့ Share ပါ။ Post တင်ချိန်မှာလည်း သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး ၃ ယောက်ကို Tag တွဲဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
၂။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Facebook Account မှာတင်ထားတဲ့ Tik Tok Video link လေးကို Copy လုပ်ပြီး Sofy Myanmar Message Chat Box သို့ နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ် တို့နဲ့တကွအတူပေးပို့ပါ။
၃။ ပြိုင်ပွဲဝင် TikTok Video များကို ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ မှ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီ အထိသာ နောက်ဆုံးထား လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကာလကို (၃ပတ်တိုင်တိုင်) ကျင်းပပေးသွားမှာမို့ နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေကို Challenge ခေါ်ပြီး အပြိုင် ဆော့ပြီး ဆုငွေတွေ အရယူလိုက်ရအောင်!
? ဆုရရှိသူများကို ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၄) ရက်နေ့အတွင်း ကြော်ငြာပေးသွားမှာဖြစ်ပါပြီး ဆုများအနေဖြင့်
+ အကောင်းဆုံး Video ဖန်တီးနိုင်ဆုံးဆု စုစုပေါင်း (၄)ဆု – ငွေကျပ် (၁)သိန်း + Cool Fresh Product Gift Set
+ Reaction အများဆုံးဆု (၁)ဆု – ငွေကျပ် (၁)သိန်း + Cool Fresh Product Gift Set
+ ဒါအပြင် နှစ်သိမ့်ဆု စုစုပေါင်း (၂၀)ဆု – Cool Fresh Product Gift Set ကို အသီးသီး ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
? ပြိုင်ပွဲဝင်(၁)ဦးလျှင် မိမိစိတ်တိုင်းကျ TikTok Video ကို (၁)ကြိမ်သာပေးပို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ အခြားသောသူများမှတဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်TikTok Video အကြိမ်ကြိမ်ပို့လာပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
? ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်းမရှိသော TikTok Video များ၊ ညစ်ညမ်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများကို ပယ်ဖျက်ပါမည်။ ပယ်ဖျက်ခံရသူ၏ TikTok Video ကို Sofy Myanmar Facebook Page တွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိသလို ပယ်ဖျက်ကြောင်းကိုလည်း အကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ။
?ပမာဏရွေးချယ်ထားသူများထဲမှ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်(၈၀) ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး လျှောက်လွှာလက်ခံကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် Sofy Myanmar Facebook Page တွင်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
? ယှဉ်ပြိုင်သူသည် votes အတုများ သုံးထားပါက သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ပါက ပြိုင်ပွဲမှ အလိုအလျောက် နှုတ်ထွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
? ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များကို ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင် မူတည်၍ Sofy Myanmar ၏ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါမည်။
? မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Unicharm မိသားစုများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
? အခုပဲ နီးစပ်ရာ စတိုးဆိုင်နှင့် Super Market တွေမှာ Sofy Eva Cool Fresh သို့ Sofy Cooling Fresh products တွေဝယ်ယူပြီး TikTok ဆော့ရင်း ဆုငွေရရှိဖို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ရအောင်..
May Melody ကစားထားတဲ့ Tik Tok လေးကတော့
" Stay Cool Stay Fresh TikTok Campaign " လေးကို သိပြီးကြပြီလားဟင်🙂👉🏻👉🏻 Sofy Eva Cool Fresh ဖြစ်ဖြစ်Sofy Cooling Fresh နဲ့ဖြစ်ဖြစ် နှစ်သက်ရာ Sofy လေးနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အောက်က Link လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်👍👉🏻 https://vm.tiktok.com/J11K82U/👉🏻👉🏻ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲမှ Like & Share အများဆုံး ၁ယောက်နဲ့ အဆန်းသစ်ဆုံး၊ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများအတွက်လည်း ဆုတွေရွေးချယ်ပေးမှာမို့ winner ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်🥇🏆ပြိုင်ပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေကိုတော့ Sofy Myanmar Facebook Page မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပြောပြရင်းနဲ့ မေလနဲ့အတူ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်😘🙂🥰#StayCoolStayFresh#SofyCoolingFresh#SofyEvaCoolFresh#SofyMyanmar
Posted by မေလသံစဉ် May Melody on Sunday, June 14, 2020
Stay Cool Stay Fresh Challenge Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို ဘယ်လို ဖန်တီးရသလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်က ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
🎁 Stay Cool Stay Fresh Challenge 🎁
ဟေး အချစ်တို့ ရေ Cool Fresh နဲ့ အတူ Tik Tok ဆော့ရင်း ဆုငွေ တစ်သိန်းဆု (၅ဆု) အပြင် Cool Fresh product တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်ရေးအတွက် အခုပဲ TikTok Video ရိုက်ပြီးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ရအောင်..Campaign အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ Link လေးထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။https://chelmo.tips/2020061501/#StayCool_StayFresh #Sofy_Myanmar
Posted by Sofy Myanmar on Monday, June 15, 2020
TagsSofy MyanmarStayCool Stay Fresh